Nayjar - Gpedia, Your Encyclopedia
Isuduwe: 16°58′26″N 7°59′27″E﻿ / ﻿16.9738889°N 7.9908333°E﻿ / 16.9738889; 7.9908333
Niger, oo sidoo kale loo yaqaano Niger ayaa   [/]  waa waddan aan wali lahayn dhul galbeedka Afrika oo loo yaqaano River Niger. Niger waxaa u dhaxeeya Liibiya waqooyi-bari, Chad oo bariga, Nigeria iyo Benin koonfur, Burkina Faso iyo Mali galbeedka, iyo Aljeeriya galbeed. Niger waxay ku dabooshaa aag gaaraya 1,270,000 km2 (490,000 sq mi), taas oo ka dhigaysa waddanka ugu weyn ee galbeedka Afrika. In ka badan 80% dhulkeeda waxay ku taala xeebta Sahara. Dadka ugu badan ee Muslimiintu ku nool yihiin 21 milyan oo qof  ayaa ah kuwa ugu badan ee ku yaal koonfurta iyo galbeedka dalka. Magaalada caasimadda waa jameyl, oo ku taalla geeska koonfur galbeed ee Niger. Niger waa dal soo koraya, oo si joogto ah ugu tiirsan hoosta hoose ee Index of Human Development Index (HDI); waxaa lagu magacaabay 187th 188 dal sannadka 2015.  Inta badan qaybaha aan degaanka ahayn ee dalka ayaa halis ugu jira abaaro goos-goosad ah iyo dhul-beereed. Dhaqaalaha ayaa xoogga saaraya haqab-beelka, iyada oo qaar ka mid ah beeraha dhoofinta ee koonfurta bateen, iyo dhoofinta alaabta ceeriin, gaar ahaan macdanta yuraaniyaanka. Niger waxa ay wajahayaa caqabado adag oo ku aaddan horumarkooda sababtoo ah mowqifkeeda, dhul-beereedka, beeraha aan baaxad laheyn, sicirka bacriminta sare ee aan laheyn dhalashada xakamaynta, iyo natiijada ka dhalatay,  heerka tacliinta saboolka ah iyo saboolka dadkeeda, , daryeelka caafimaadka oo liita, iyo deggaanka deegaanka. Nayjar waa wadanka ku yaalo qaarada Afrika Template:Stack
↑ Niger at GeoHive Template:Webarchive
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nayjar&oldid=180460"